Warbaahinta Caalamka oo shaacisay dhab ahaan cidda maalgelisa Ururka Alshabaab “Waxbadan ogow”. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaWarbaahinta Caalamka oo shaacisay dhab ahaan cidda maalgelisa Ururka Alshabaab “Waxbadan ogow”.
Warbaahinta Caalamka oo shaacisay dhab ahaan cidda maalgelisa Ururka Alshabaab “Waxbadan ogow”.
August 14, 2019 marqaan Faalloyinka, Soomaliya, Wararka maanta 1
Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika, ayaa cambaareeyay wax uu ku tilmaamay fara-gelin debadda ah oo lagu hayo Arrimaha Soomaaliya, si loo wiiqo dadaallada Nabadda iyo guulaha la gaaray.
Golaha ayaa bayaan uu soo saaray sidoo kale ku cambaareeyay dhinacyada maal-geliya dhaqdhaqaaqa Al-shabaab ee Soomaaliya, waxaana uu ku celiyay taaegeeridda shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed.
Bayaanka ayaa ku soo beegmay, xilli mas’uuliyiin ka socda dalal Carbeed ay booqdeen gobolka Somaliland, si ay ula tacaamulan iyago aan soo marin dowladda Federaalka Soomaaliya.
Villa Somalia ayaa caddaysay, in dhammaan heshiisyada lala galo dowlad goboleedyada, aysan wax ka soo qaad lahayn, haddii aysan saxiixin xukuumadda Federaalka Soomaaliya. sidoo kale waxay cambaaraysay heshiis ay wada-galeen Somaliland iyo Imaaraatiga oo la xiriiray saldhig laga siiyay magaalada dekedda leh ee Berbera oo ku taalla xeebta Badda Cas.
Midowga Afrika ayaa hore u walaac uga muujiyay in ay sii kordhayso fara-gelinta debadda ah ee lagu hayo Arrimaha gudaha Soomaaliya, halka Baarlamanka Midowga Yurub uu Imaaraatiga ka dalbaday, in uu joojiyo wax kasta oo halis gelin kara xasiloonida Soomaaliya iyo in uu ixtiraamo Qarannimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya.
Hoos ka eeg
Tolow Hadii maanta uu Aadi lahaa Jeneraal Caare xajka, maxaa dhici lahaa? Qore:Fowsi
Sawiro:- qaar kamid ah haweenka Somaliland oo Coll.Caare ku booqday buuraha uu kaga sugan yahay Gobolka Sanaag.
Argagixisada, iidoor baa maal geliya, Shacabkoodii oo dawarsanaya ayey dhaqaalihii ayka helayeen, dekeda berbera, shabaab baa loo gudbiya waad aragteen,kuwa koofur ka yimaadaa, toos ayey Burca iyo Cerigaabo u galaan ,iyaga oo la hagayo, walee iyaga ayaa ku khasaari doona argagixisa taageer.